Warbixin sir ah oo aga heley sirdoona Yahuuda. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Warbixin sir ah oo aga heley sirdoona Yahuuda.
Warbixin sir ah oo aga heley sirdoona Yahuuda.
Sarkaal Sare oo katirsan Ciidanka Gardarada ee Maamulka Yahuuda gaar ahaan kuwa Cirka ayaa u sheegey mid kamid ah wargeysyada ugu afka dheer ee ka soobaxa dhulka Yahuudu ay itaalka ku joogto ee Falatiin in ay qorsheyneya weerar ay ku qaadaan Goobaha hubka halista ah ay u yaalaan Dalka Eraan.
Sarkaal kaan oo magaciisa aan la shaacin ayaa waxaa uu sheegey in israaiil ay markaan qaatinka taagan tahay Hub ay Iraan farsameyneyso oo halistiisa dhinaca israaiil ay sii kordheyso haddii hada aan wax laga qabana ay isha baarkeeda tahay Burburka israaiil taasina macquul ma aha ayuu uyiri; Sarkaalkaan.
Dhoolatuskii ay dhawaantaa Soo bandhigeen Ciidanka Ilaalada Kacaanka Jamhuuriyada Iraan ayaa Hurda la, aani ku beerey Ciidanka Yahuuda oo ogsoon waxaa ay geysteen inkastoo wararkaasi ay yihiin kuwo sir ah oo dhawaantaan un laheley.
Lkn wararka qaar ayaa tilmaameya in Mareykanka uu Yahuuda kula talineyo in Eraan aan weerar lagu qaadin oo shaqadu ay ku ekaato oo kaliya Hadadaad iyo Cunaqabatey, hadiise Iraan weerar lagu qaado waxaa dagaalkaasi uu ka dhigan yahay baa, ba Xulafada Gobalka oo ay Israaiili ay kujirto.
Madaxweyne Donal Trum ayey Sanadkiisii ugu dambeeyey qaar kamid ah lataliyaashiisu ay ku riixeen in inta uu jooga Talada Dalka Mareykanka ay tahay in Tehraan la marsiiyo dhabihii Ciraq iyo Afgaanistaan lkn madaxweyne Trum oo maanka ki haaya Quwada Iraan ayaa Taladaasi ka maagey oo ku gacanseyrey.
Dadka Siyaasada kafaalooda ayaa Go, aankaa uu qaatey madaxweynihii hore ee Mareykanka Trum ku tilmaamey kii ugu macquulsanaa Afartii Sano ee uu joogey Aqal cad ee mareykanka.
hadaba maxay kulatahay sabbta Israaiil ay u dooneyso Weerar lagu qaado Eraan?
W/Q: #Wariye #C/#wahaab #Aadan #C/#raxmaan.
Previous articleMuraadkaaga waxaa loogu seexdaa Masallo Eey.
Next articleDilal ka dhacay magaalada Kismaanyo
Barakac ka bilaawday degaano ka tirsan Gobolka Gedo
axmed shiikh - January 31, 2021 0
Wararka naga soo gaaraya dagmada Beled-Xaawo ee Gobolka Gedo aya waxaa ay sheegayaan in cabsi ay soo food saartay Shacabka halkaasi ku dhaqan ayna...
Wasiirkii Arrimaha dibadda Zimbabwe oo u dhintay COVID-19.
Maxaa ku soo kordhat kulanka Madaxweyne Qoor Qoor iyoJames Swan
Ciidamada Boliiska Soomaliland oo xiray Haweenay bahdil ku sameysay Gabar...
Saciid Cabdullaahi Deni “ waxba isma dhamaan dhaqanka alshabaab iyo madaxdweynaha...
Madaxweyne doorashiisa lagu murmay oo lagu hareereeyay caasimadda
axmed shiikh - February 6, 2021 0